Mofomamy voanio sy amandy - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
Mofomamy voanio sy amandy
fitsangatsanganana60 minitraOlona 12264 kaloria
Tsy haiko firy ny mofomamy spaonjy azoko atao isan-kerinandro ... roa, telo ... ny zava-misy dia manidina izy ireo! Matetika aho dia miova amin'ny endrika, akora ary vera, mba tsy hanararaotana ireo akora sasany ary tsy hiteraka ny mpiasa. Ilay napetrako androany dia manana amandy sy voanio grated. Tandremo noho izany raha tianao ireo akora ireo.
Raha manandrana ianao dia ho hitanao fa a mofomamy maraina, an'ireo izay somary maina ary tena tsara atsoboka amin'ny ronono.
Ny amandy nampiasako dia manta sy tsy voafehy. Manome loko maitso ny donatantsika izy io nefa mampanan-karena kokoa azy io.
Mamporisika anao koa aho hisolo siramamy fotsy amin'ny siramamy cane. Satria avelantsika ny rendrarenin'ny fahandroan-tsakafo ao an-trano, dia hataonay miaraka amin'ireo akora tsara indrindra.
1 Mofomamy voanio sy amandy
Spaonjy lavorary atsoboka amin'ny ronono. Miaraka amin'ny amandy, voanio grated ary siramamy cane.
Amandy manta 100 h misy hoditra
Siram-bary 150 g
Menaka tanamasoandro 80 g
100 g ny lafarinina
Voanio grated 100 gr
8 g masirasira
Sugar siramamy handravahana
Apetrakay ao anaty vera ny amandy. Torotorointsika izy ireo amin'ny alàlan'ny programa 5 segondra, hafainganam-pandeha 10. Avoakanay izy ireo ary hotehirizinay.
Ampifanarahanay amin'ny lolo ny lolo. Apetrakay ny atody sy ny siramamy amin'ny tehina. Izahay dia manao fandaharana 3 minitra, hafainganam-pandeha 3.
Ampianay ny solika sy ny programa 8 segondra, hafainganam-pandeha 3.
Esorinay ny lolo. Ampio ny lafarinina, ny masirasira, ny voanio voakiky ary ny amygdala namboarintsika tamin'ny voalohany. Izahay dia manao fandaharana 10 segondra, hafainganam-pandeha 5. Nampifangaroinay tamin'ny spatula fotsiny ny zava-drehetra.
Apetrakay ao anaty lasitra izay nopetahantsika menaka teo aloha ny fangaro. Azonao arahana ity fomba fahandro ity tsy tapa-kazo.
Mofomamy amin'ny 180 mandritra ny 40-45 minitra izahay.
Rehefa avy eo amin'ny lafaoro isika dia avelantsika hangatsiaka kely alohan'ny ahodina. Rehefa nangatsiaka tanteraka izy dia haingoina amin'ny siramamy mangatsiaka.
Fanazavana fanampiny - Tsy miraikitra amin'ny bobongolo
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Tsy mahazaka laktose, Resipeo ho an'ny ankizy, Fivarotana mofomamy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Resipeo thermomix » Fivarotana mofomamy » Mofomamy voanio sy amandy
Iciar Martin Hernandez dia hoy izy:
Tena manan-karena io!
Valiny ho an'i Icíar Martín Hernández
Cristina Anelo Sanchez dia hoy izy:
Valiny tamin'i Cristina Anelo Sánchez
Karaoty vita amin'ny karaoty sy paoma miaraka amina almond
Pasta chorizo ​​namboarina namboarina